पाकिस्तानबिरुद्धको शिरिज अष्ट्रेलियाले २-० ले जित्यो ! अन्तिम खेलमा पाकिस्तानको लज्जाष्पद हार |
२०७६, २२ कार्तिक शुक्रबार १९:३०
पाकिस्तानबिरुद्धको शिरिज अष्ट्रेलियाले २-० ले जित्यो ! अन्तिम खेलमा पाकिस्तानको लज्जाष्पद हार
२०७६, २२ कार्तिक शुक्रबार १९:३० November 8, 2019 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं : पाकिस्तान विरुद्धको तेस्रो टी-२० खेलमा अष्ट्रेलिया १० विकेटले विजयी भएको छ । शुक्रबार भएकाे खेलमा जितसँगै अष्ट्रेलियाले तीन खेलको सिरिज दुई-शून्यले जितेको छ । पर्थमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पाकिस्तानले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर एक सय ६ रन बनायो । पाकिस्तानका लागि दुई खेलाडीले मात्र दोहोरो अंक जोड्न सके । जसमा इफ्तिकार अहमदले ४५ तथा इमाम उल हकले १४ रन बनाए ।
बलिङमा अष्ट्रेलियाका केन रिचर्डसनले तीन तथा मिचेल स्टार्क र सिन एबोटले दुई-दुई विकेट लिए । जवाफमा अष्ट्रेलियाले ११ ओभर पाँच बलमा कुनै विकेट नगुमाइ लक्ष्य पूरा गर्यो । अष्ट्रेलियाको जितमा डेभिड वार्नरले ४८ तथा एरोन फिन्चले ५२ रन बनाए । अष्ट्रेलिया र पाकिस्तानबीचको पहिलो खेल रद्द भएको थियो भने दोस्रो खेलमा अष्ट्रेलिया विजयी भएको थियो ।
नेपालको लज्जास्पद हार, बलरले बनाए नेपालका लागि सर्वाधिक रन
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले इंग्ल्यान्डको मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी)सित प्रथम श्रेणी क्रिकेटमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ ।शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाल २०८ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको हो । ३९३ रनको चुनौती पछ्याएको नेपालले ४१ ओभरमा ‘अलआउट’ हुँदै १८४ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
पहिलो इनिङ्समा ४४ ओभर ४ बलमात्र क्रिजमा टिकेर नेपालले १५३ रनमात्रै बनाएको थियो । दुवै इनिङ्समा नेपाली टिमका ब्याट्सम्यानहरु चल्न नसकेपछि बलरहरुले नै सर्वाधिक स्कोर जोडेका थिए । पहिलो इनिङ्समा सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक ३९ रन जोडे । दोस्रो इनिङ्समा सोमपाल कामीले नेपालका लागि सर्वाधिक ५१ रन बनाए ।
दोस्रो इनिङ्समा नवौं विकेटका लागि सोमपाल र सन्दीपबीच ५० रनको साझेदारी भयो । सोक्रममा सन्दीपले २५ रनको योगदान गरे । bराष्ट्रिय टिमको कप्तानी सम्हालेका ज्ञानेन्द्र मल्लले भने पहिलो इनिङ्समा रनको खाता खोल्न सकेनन् । दोस्रो इनिङ्समा पनि ६ रनमात्रै जोडे ।
तीनदिने खेलमा दुई इनिङ्समा नेपालले ८५ ओभरमात्र खेल्दा चर्को आलोचना व्यहोरेको छ । यसअघि, पहिलो इनिङ्समा एमसीसीले अलआउट हुँदै ३६४ रन बनाएको थियो । दोस्रो इनिङ्समा एमसीसीले ६ विकेटको क्षतिमा १८६ रन बनाएर इनिङ्स समाप्ती गरेको थियो ।
यसअघि भएको एकदिवसीय क्रिकेटमा भने नेपालले ५ विकेटको जित हासिल गरेको थियो । नेपाल भ्रमणमा रहेको एमसीसीले अब शनिबार ट्वेन्टी–२० खेल खेल्ने कार्यक्रम छ । नेपाली क्रिकेट विकासका लागि तयार गरेको ‘लिगेसी टुर’अन्तर्गत् एमसीसीको टिम नेपाल आएको हो ।